Cyberex စွဲလမ်းမှုကိုစတင်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှု - တစ် ဦး ချင်းအားနည်းခြင်း၊ အားဖြည့်ခြင်းနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရား (၂၀၁၀၉)၊ Prause et al အားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ၂၀၁၅ ။
ကနဦးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကျဘာစွဲ၏: တစ်ဦးချင်းအားနည်း, စစ်ကူယန္တရားနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရား (2019): ။ ကောက်နုတ်ထားပါတယ် Prause et al ခွဲခြားစိတ်ဖြာ, 2015
စာရွက်အပြည့်နှင့်လင့်ခ် - ဘာစွဲ၏ကနဦးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ: တစ်ဦးချင်းအားနည်း, စစ်ကူယန္တရားနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရား (2019)
မှတ်ချက် - အခြားသက်တူရွယ်တူများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းများက Prause et al ။ , 2015 သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုထောက်ခံသည်။ ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015
Prause critiquing ကောက်နုတ်ချက် et al။ , 2015:
ပထမဦးစွာသံမဏိ et al ။ (2013) ကြားနေပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာထက်ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုသည့်အခါအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (VSS) ၏မြင်ကွင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် P300 အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု သာ. ကြီးမြတ်လွှဲခွင်သွေးဆောင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရလဒ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းများအတွက်တစ်ဦးချင်းရဲ့ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုစေပါတယ်, ဒါပေမယ့်သံမဏိရဲ့သုတေသနကိုကိုးကားနိုင်ရန်ပုံမှန်ဘာသာရပ်များကင်းမဲ့သောအယူအဆအတည်ပြုပုံရသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, LPP အစိတ်အပိုင်းများအကြာတွင် P300 ထက်ပေါ်လာပါသည်။ နှောင်းပိုင်းတွင်အပြုသဘောအလားအလာသိသိသာသာပစ္စည်းအပြောင်းအလဲနဲ့၏ဆွနဲ့ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ညစ်ညမ်းပစ္စည်း (ဟီလ်တန်, 2014) (ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ သာ. တစ်ဦးချင်းစီရဲ့အလိုဆန္ဒ, သာ. အဆိုပါ LPP တည်ငြိမ်မှု) ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီရဲ့အလိုဆန္ဒထင်ဟပ်နေသည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဥ်း, ချီးကျူးခြင်းနှင့်သံမဏိ et al ။ (2015) တိုးတက်မှုစမ်းသပ်မှုမှာ VSS တစ် ဦး ချင်းစီမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုသူများကိုထပ်မံတိုးချဲ့ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုအလွန်အကျွံကြည့်ရှုပြီးလိင်ဆန္ဒများကိုပိုမိုတင်ပြသောဘာသာရပ်များသည်ခေါ်ဆောင်သွားသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်နေသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ LPP amplitude သည်သေးငယ်သောကြောင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေနှင့်ပတ်သက်သောသဲလွန်စများကတပ်မက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟူသောအတွေးနှင့်ဆန့်ကျင်နေပုံရသည်။ တကယ်တော့၊ ပညာရှင်အချို့က Prause နှင့် Steele တို့၏လေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုသောလိင်အင်္ဂါရုပ်ပုံများသည်သူ့အားစွဲလမ်းစေနိုင်သည်ဟုထောက်ပြခဲ့သည်။ စားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းများ, မစွဲလမ်းများ (Gola et al, 2017; ။ Gola, Wordecha, Marchewka, & Sescousse, 2016) ။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတွင်ပါဝင်သောသီအိုရီ (IST) ၏သီအိုရီအရ၊ စွဲလမ်းမှုအတိုင်းအတာတိုးလာသည်နှင့်အမျှစွဲလမ်းမှုသည်စွဲစွဲသူများ၏စွဲလမ်းလိုသောဆန္ဒများကိုပိုမိုစွဲလမ်းစေနိုင်သည်။ (Berridge, 2012; Robinson, Fischer, Ahuja, Lesser, & Maniates, 2015)၊ သို့သော်စွဲစွဲသူများ၏စွဲလမ်းမှုမှာတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာပြီး LPP လွှဲခွင်လျော့ကျမှုက CA သည်မူးယစ်ဆေးစွဲနေကြောင်းဖော်ပြသည်။
မှတ်ချက် YBOP: အထက်ပါဝေဖန်မှုသည် Prause ၏ 2013 EEG လေ့လာမှုကိုနှိုင်းယှဉ်။ နှိုင်းယှဉ်။ အခြားသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းများနှင့်အလွန်ဆင်တူသည် (သံမဏိ et al။ ) Prause et al ။ , 2015 နှင့်အတူ။ အခြားလေ့လာမှုများအားလုံးကဲ့သို့ပင်ဤတစ်ခုသည်ဂိုလာ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အဖြစ်မှန်၌လေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးသည်စွဲခြင်းပုံစံ (သည်းခံမှု) နှင့်ကိုက်ညီသောလေ့ကျင့်ခန်း (သို့မဟုတ်) စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုသက်သေပြခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ရှင်းပြပါရစေ။
သင်သိရဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါဟာင် Prause et al ။, 2015 ႏွင့္ သံမဏိ et al ။, 2013 အဆိုပါခဲ့ တူညီတဲ့ "porn စွဲ" ဘာသာရပ်များ။ အဆိုပါပြဿနာကြောင့် သံမဏိ et al ။ နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုရှိခဲ့! ဒီတော့ Prause et al ။ , 2015 ထံမှ 2013 ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်လျှင် သံမဏိ et al။ , 2013 (သေးပါကအထက်အမည်ရှိတူညီသောအတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုခံစားခဲ့ရ) အနေနဲ့အမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်အုပ်စု။ ရလဒ်: ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် "သူတို့ porn ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများကြုံနေရတစ်ဦးချင်းစီ" vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုတစက္ကန့်ထိတွေ့မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ Prause ရဲ့နှစ်ခု EEG လေ့လာမှုများ၏အမှန်တကယ်ရလဒ်များကို:
သံမဏိ et al ။, 2013: porn ပိုမို cue-reactivity ကိုအတူပုဂ္ဂိုလ်များခဲ့ နည်းသော တစ်ဖက်, ဒါပေမယ့်မရ masturbate နည်းအလိုဆန္ဒနှင့်အတူလိင်အဘို့အလိုဆန္ဒ။
တစ်ဦးကရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ပုံစံဟာ2လေ့လာမှုများကနေပေါ်ထွက်လာ: ။ အဆိုပါ desensitized သို့မဟုတ် habituated vanilla porn ငှါ၎င်း, porn ပိုမို cue-reactivity ကိုသူတို့အမှန်တကယ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံထက် porn မှ masturbate မှပိုမိုနှစ်သက်ခဲ့ကြသည် "porn အသုံးပြုသူများအစွဲ" သူတို့ desensitized (စွဲလမ်းတစ်ဘုံအရိပ်အယောင်) နှင့်တစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်သဘာဝကဆုလာဘ် (ပူးပေါင်းလိင်) ကိုအတုလှုံ့ဆော်မှုပိုမိုနှစ်သက်ခဲ့ကြသည်ရိုးရှင်းစွာထားပါ။ porn စွဲတိမ်အဖြစ်ကဤရလဒ်များကိုအနက်ကိုဘော်ပြစရာလမ်းလည်းမရှိ။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။